ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မပြီးသေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မပြီးသေးပါ
Posted by asiamasters on May 28, 2012 in Complaint / Claim, Ideas & Plans, Jobs & Careers | 11 comments
ဲမြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ဒီမိုကရေစီဘက်ကို စပြောင်းလာခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ မေးခွန်းနှစ်ခုမေးစရာရှိတယ်။ တစ်ခုက ဒီလိုဒီမိုကရေစီဘက်ကို ပြောင်းလဲလာတာကောင်းသလားဆိုတာရယ
်။ အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တော့ ဘာတွေပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုပေါ့။ ကောင်းသလားဆိုတော့ အလွန်ကောင်းတာပေါ့။ အနဲဆုံးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို လာလည်တဲ့လူတွေများလာတယ်။ Anglo-saxon နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွ…န်လာပြီး၊ အမေရိကန်၊ EU sanction တွေလျှော့ပေါ့လာတယ်။ မြန်မာအစိုးရအတွင်းမှာ လည်း အကြံပေးတွေအမျိုးမျိုး၊ ဆရာကြီးတွေအမျိုးမျိုး၊ အသင်းအဖွဲ့မျိုးစုံ ဖွဲ့စည်းပြီး ရှုဒေါင့်ပေါင်းစုံ ဟိုလိုလုပ်ပါလား။ ဒီလိုလုပ်ပါလား အစရှိသည်ဖြင့် တတ်ယောင်ကားလုပ်နေတာတွေလဲရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ တရုပ်စကားပုံလေးတစ်ခုကိုသာ သတိရမိပါတယ်။ ” မိသားစု ပျော်ရွှင်ချင်ရင် အားလုံးအလုပ်လုပ်ကြ” လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်မရှိကြတဲ့ မိသားစုတွေဟာ အချင်းချင်း ချစ်ခင်ကြဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ ပထမအချက်ကတော့ သူတို့ဟာ အလုပ်မရှိတော့ နေ့စဉ်တွေ့နေရတယ်။ ၀င်ငွေမရှိတော့ မပြည့်မစုံဖြစ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ဖို့နေနေသာသာ စကားနဲနဲမှားရင် တောင် ရန်ဖြစ်လာဖို့များတယ်။ အလုပ်ရှိတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ အလုပ်ရှိတော့ အားလုံးအလုပ်သွားနေတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတွေ့ရဘူး ဒီလိုမတွေ့ရတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးသတိရလာတယ်။ အလုပ်လုပ်လို့ ၀င်ငွေရလာတော့ အဆင်ပြေလာတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးတွေ့ချိန်နဲတော့ ပိုပြီးချစ်ခင်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစုတစ်ခု ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေချင်ရင်အားလုံးအလုပ်လုပ်ပါ လို့ဆိုတာပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ လည်း မိသားစုတစ်ခုလိုပါပဲ။ အားလုံးအလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဖက်ကိုပြောင်းပြီး Capitalism ဘက်ကို သွားရင် ပထမဦးဆုံးက Job လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ကို ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစားပေးဟာ မော်တော်ကားတွေတင်သွင်းခွင့်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်အကိုင်တွေကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေဖန်တီးပေးလာဖို့အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတွေကို စက္ကန့်မဆိုင်းအပြီးသတ်ရန်လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ဥာဏ်ပညာတွေအားလုံးအသုံးပြုပြီး လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပဒေတွေရှိလာရင် အလုပ်ရှင်တွေအတွက် မျှတတဲ့အခွန်အတုတ်တွေကောက်သလို၊ အလုပ်သမားတွေအတွက် မျှတတဲ့ လုပ်ခရဖို့အတွက် ကို ကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ စနစ်ကျစေဖို့ အခြေခံကနေ ကျွမ်းကျင်မှုစံတွေကို ရေးဆွဲပြီး စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါက အခုဒီနေ့လုပ်ရမှာ ဆိုင်းလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ရော၊ အကြံပေးကြီးများကို ပါ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် တွေအတွက်သာစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးပါ။ ကျန်တာတွေက နောက်မှလုပ်လို့ရပါတယ်။ အခု စက္ကန့်မဆိုင်းပဲ ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေတွေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက် စေလိုပါတယ်။ ဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုမှရပါမယ်။ မြန်မာဘာသာစကားဟာ ဒီနေ့ ရှိနေတဲ့ Political, Economics, Social နဲ့Technology တွေကို မခြုံငုံနိုင်ပါဘူ။ မြန်မာလိုနဲ့ရေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေက အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိဘာတွေ ပြီးထားပြီးပြီလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မယ်မယ်ရရမပြီးသေးပါ။ အပေါ်ယံနဲ့ နဲနဲလတ်တဲ့တပတ်ရစ်ကားတွေထပ်ဝင်လာတာကလွဲလို့ဘာမှ မလုပ်ရသေးပါ။ မလိုတာတွေကို မလုပ်ပဲ လိုတာတွေကို ချက်ချင်းလုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
အလုပ်အဆက်မပြတ်လုပ်နေရမှ မိသားစုတွေအချင်းချင်း ပိုချစ်ချင်လာမယ် ဆိုတာလေးကို မှတ်သွားပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရရဲ့ ပညာရေးစနစ်ဆိုးကြောင့်
ဘွဲ့ သာရကြပါတယ် ပညာရေးအဆင့်အမှီကြပါဘူး။
ဒီစနစ်ကနေ ဆေးတက္ကသိုလ်၊နည်းပညာတက္ကသိုလ် နဲ့ 
အခြား တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တွေ၊ အခြေခံပညာကျောင်းတွေ မှာ
ဆရာ၊ဆရာမတွေဖြစ်လာကြတဲ့ သူတွေ ပညာရေးအဆင့်
ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့် ကိုယ်ကို အသိဆုံးပါ။
သူတို့ သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဆို ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
အဆင့်မမှီတဲ့ ဆရာဝန်တွေကြောင့် တစ်နေ့ တစ်နေ့လူနာတွေဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ် ။
အဆင့်မမှီတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကြောင့် တိုင်းပြည် ဘယ်လောက်နာခဲ့ရတယ်။
အဆင့်မမှီတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် နိုင်ငံတော်ကြီး ဘာဖြစ်သွားခဲ့သလဲ။
ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရေးစနစ်ဆိုးကြောင့် ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ခံခဲ့ရသလဲ။
ဒီနေ့ ထိ သုံးစားလို့ မရတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို အမြန်ဆုံးပြင်ရပါ့မယ်။
အခု သမ္မတအကြံပေးမှာပါတဲ့သူတွေမှာလည်း ဒီစနစ်ဆိုးရဲ့ အမွေဆက်ခံထားသူတွေ အများကြီးပါပဲ။
အမတ်တွေ၊ ဝန်ကြီးတွေလည်း ဒီစနစ်ဆိုးရဲ့ အမွေဆက်ခံထားသူတွေ အများကြီးပါပဲ။
ဒါကို ဘယ်သူငြင်းချင် ပါသလဲ။
ဒါကြောင့် ဥပဒေတွေကလည်း ဒီနေ့ တစ်မျိုး နောက်နေ့ တစ်မျိုး ဖြစ်နေတာ
အလုပ်လုပ်မဲ့ သူတွေ အလုပ်လုပ်တတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
တိုင်းပြည် နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ၊ ဥပဒေတွေကို ကြည့်နေရတာ
ပညာရေးစနစ်ရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံပြီးမှ အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့သူတွေချဉ်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် စီးပွါးရေး လုပ်ပါ။ ပညာရေးစနစ်ကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။
ခရီးဝေး နီးသေးလား မှတ်ကယ်
အကြီးအလေး စည်းတွေးကာ ပေါင်းစု ရုန်းရင်ဖြင့်
တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ ၀င်အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့……
မြန်မာဘာသာစကားဟာ ဒီနေ့ ရှိနေတဲ့ Political, Economics, Social နဲ့Technology တွေကို မခြုံငုံနိုင်ပါဘူ။ မြန်မာလိုနဲ့ရေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေက အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝဥဿုံထောက်ခံတဲ့ စကားလေးပါဗျာ …။
strategic human resource management ကို ရှည်တယ်ထင်ရင်
SHRM လို့ ပြောလို့ စေ့ငုတဲ့အချိန် .. မဟာဗျူဟာမြောက် လူ့စွမ်းအား
အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဗေဒ ဆိုမှ ပြည့်စုံမှာပါ တဲ့ … …
overhaul လုပ်မှရမယ်ဗြ။ အီရတ်တို့ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှာတော့ အမေရိကန်အစိုးရဂ ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီပုံအောပြီး တိုင်းပြည်အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေကို ပြန်လည်ထူထောင်တယ်။ ပညာရေး ကျန်းမာရေး လမ်းတံတား စက်ရုံတင်မက အစိုးရဝန်ထမ်းဒွေဂိုဘာ ဒေါ်လာနဲ့ ထိုက်တန်ဒဲ့ လစာပေးဒယ်။ တခုဒေါ့ရှိဒယ်..အန်ကယ်ဆန်ဂျီး ပုံအောဂျင်စိတ်ပေါက်အောင် အီရတ်မှာ ရေနံထွက်တယ်၊ အာဖဂန်နိုင်ငံဂ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်းမစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အခရာကျဒယ် ပြီးတော့ မြေအောက်သယံဇာတ အရင်းအမြစ် အလျှံအပယ်ရှိဒယ်။ မြန်မာပြည်မှာဂေါ…။ ရှိသင့်သလောက်ရှိပါဒယ် သို့သော် လာကူဂျင်စိတ်ပေါက်အောင် ဆွဲဆောင်ဒတ်မှရမယ်။ ထိရောက်တဲ့ အကူအညီ မမျှော်ဘဲ ကြေးမုံတို့အမျိုး တရုတ်ကြီးအားကိုးနဲ့ တူးဖော်ထုတ်ယူနေလို့ဂဒေါ့ ရှိမဲ့စုမဲ့ သယံဇာတတွေ (၁) မြန်မြန်ကုန်မယ် (၂) ထိုက်သင့်တဲ့ဈေး မရဘူး (၃) နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု မရဘူး၊ ရလည်း တတိယဒန်းစားပဲရမယ် (၄) ပြည်တွင်းအလုပ်သမား ဈေးကွက်လည်းနာဒယ် (၄) ပတ်ဝန်းကျင် ပိုပျက်စီးမယ်။
လိုအပ်ချက်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အထောက်အကူပြုဒဲ့ ဥပဒေ အစီအမံများ ချမှတ်ပေးရမယ်၊ ကြိုးနီစနစ်လျော့ရမယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာမည့် အစိုးရ အစိုးမရ အဖွဲ့များဂို ထိန်းညှိဖို့ ပြည်တွင်းအစိုးရမဟုတ်တဲ့ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့များ ပျိုးထောင်ပေးရမယ်။ ကိုကျော်သူတို့အဖွဲ့လို ပြည်သူတဂယ်ထောက်ခံဒဲ့သူကို ပြောဒါနော်၊ ကြံ့ဖွတ်လိုကောင်မျိုးသုံးလို့ဂဒေါ့ သောက်ပြတ်သနာ ပိုကြီးယုံဘဲရှိမယ်။ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး တည်ငြိမ်ရေးအတွက် လူထုလက်ခံ လိုက်နာနိုင်ဒဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ရှိရမယ်။ အဂုဒေါ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုရင် လမ်းပေါ်သေနတ်ကိုင် ကင်းလှည့်ပြဒဲ့ သောက်တလွဲလမ်းစဉ်ဖြစ်နေဒယ်။ နိုင်ငံဘတ်ဂျတ် ခွဲဝေမှုမှာ အရပ်ဖက်ကဏ္ဍ အသုံးစရိတ်ကို အပုံဂျီး မြှင့်တင်ပေးရမယ်၊ ရှာသမျှအားလုံး ကာကွယ်ရေးလုပ်နေလို့ မရဘူး..ဒါမှလည်း အပြင်ဂလူတွေ ပေးဂျင်ကမ်းဂျင်စိတ် ပေါက်လာမှာပေါ့။
ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုပါလို့ အကောင်းဇုံး မဟုတ်တာတော့သေဂျာဒယ် သို့သော် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဆိုပြီး ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထဲထည့်နေဒါထက်စာရင်တော့ အများဂျီး အလုပ်ဖြစ်မယ်။ အရေးကြီးတာ ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ ရေရှည်အမြင်ရှိဖို့ သင်ဂန်းစာ ယူဒတ်ဖို့ဘဲ။ ဒါတွေရှိထားရင် ပြန်လည်ထူထောင်လာဒဲ့တနေ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာကွဟေ့လို့ ကြွေးကျော်ရင်း ဘီအီးဒီစီအရက်ဖြူကို ဘလက်လေဘယ်လ်ဈေးနဲ့တန်းတူ ရောင်းချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို အစစအရာရာ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ရမယ့် အချိန်မျိုးမှာ
လူတွေလက်ခံတဲ့၊ လူတွေလေးစားတဲ့၊ လူတွေကို တကယ်(တကယ်)ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်အစစ်မျိုးလိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်ကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဥပဒေ နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် အလုပ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင်မယ်။
တချို့ ကလချာဦးနှောက်တွေက ဥပဒေစိုးမိုးတယ်ဆိုတာ
ဒုတ်မိုး ဒါးမိုးထားလို့ အခိုက်အတန့်မှာမလှုပ်ရဲတာမျိုးကို ပြောတယ်လို့ထင်နေတယ်…။
ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့်တပြည်တပန်းတွေကိုတောင် မစိုးမိုးမှဖြင့်
လူတိုင်းကိုရော စိုးမိုးနိုင်ပါ့မလား…… ဆိုတာကိုပဲ..။
ကျုပ်တော့ဖြင့်.. Poll တင်ထားတဲ့.. Vote ရလဒ်ကြည့်ပြီး.. မြန်မာတွေက… စိတ်ထဲ..အချင်းချင်းနောင်ဂျိန်ချနေတာပဲလို့.. တွေးမိတယ်..။ “၁ယောက် ၃ကိုယ်ခွဲအကျိုးသက်ရောက်မှု”လို့.. တွေးမိတာပဲ..။
မြန်မာတွေ နောင်ဂျိန်ချနေကြတာက ဒဂျီးလို သမာသမတ်ကျကျနဲ့ ကြားနေတတ်တဲ့ မျှတရေး ဝါဒသမား မရှိလို့ပါဗျ။
အလွန်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ …. သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ် … ။
်။ အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တော့ ဘာတွေပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုပေါ့။
ဆိုတာလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး … ကျွန်မပြောချင်တာက … ကျွန်မတို့ကို စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့အ ချိန်နဲ့ တွက်ကြည့်လျှင် ဒီတနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်လေးက မပြောပလောက်သေးပါဘူး ။ ဆိုလိုတာက အခုရေတွင်းတူး ၊ အခုရေကြည်သောက်မရသေးတာမျိုးပါ ။ အချိန်တနှစ်နီးပါးဆိုတဲ့ကာအတွင်း ကြီးမားတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ ….ဆန္ဒစောသလိုများဖြစ်နေမလားပဲ … ။ အခုမှ အရှိန်ယူနေတဲ့ အချိန်မို့ … စောင့်ကြည့်တာကလွဲလို့ တခြားတစ်စုံတစ်ရာပြောဖို့ .. စောနေသေးတယ်လို့ ကျွန်မတော့မြင်မိတယ် ။
တခြားဆွေးနွေးထားတဲ့ အချက်တွေ၊ အကြံပြုချက်တွေကိုတော့ထောက်ခံပါတယ် .. အပေါ်ကလူတွေလည်း ၀င်ဆွေးနွေးထားပြီးသားမို့ အသေးစိတ်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူးနော် ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံနဲ့ လူနေမှုအဆင့်တန်း မြင့်မားလာစေဖို့ စေတနာထားရေးသားထားတဲ့ပို့စ်မို့ .. လက်မထောင်ခဲ့ပါတယ်နော်
ဒီနေ့ ဖတ်မိသမျှထဲ အကြိုက်ဆုံး ပို့ စ်ပဲ
သမ္မတ အကြံပေးကြီး ဖတ်မိပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်
သဘောကျလို့ကူးပြီး ပြန်မျှပေးပါဦးမယ်ဗျား..
ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ….ဘာမှ ကို မပြီးသေးတာပါ။